Isikhokelo sabaQala kwi-Oracle Database Certification | IYO
I-Oracle Database Certification Isikhokelo esigqibeleleyo sabaqalayo
Iziqinisekiso zeSiseko seSiseko
1.Database Uphuhliso Lokusebenza:
2. SQL yam:
3. I-Oracle Database
Enye yeenkampani ezikhokelayo ze-IT kwiplanethi, i-Oracle ineziqinisekiso ezingaphezulu kwe-300 ukunikezela. Ezi zifundo zivela kwizigaba ze-9 ezahlukileyo kwaye zifihla amagatsha olwazi kuquka iinkcukacha, izikhokelo, izicelo, ubuchule, ukwenza ulawulo nabanye. I-Oracle Database Iziqinisekiso zoqeqesho gxininisa kwimveliso, izigaba, izixhobo kunye nezinto ezintsha ezenziwa yi-Oracle kubathengi bayo bonke, kwaye zihlose ukwenza abasebenzi abanetalente abangasebenzisa iminikelo ye-Oracle ngobuchule nangokuchaneka.
Izifundo ze-Oracle kunye neziqinisekiso zeenkcukacha zeenkcukacha zeenkcukacha zineenkcukacha ezahlukeneyo. Izigaba eziqhelekileyo ze-3 phantsi apho iikopi ze-Oracle zokubungqina kwiinkcukacha zihlanganiselwa khona:
Ezi ziqinisekiso zinika i-IT ingcali yeengcali ekuthumele isicelo se-Oracle. Iziqinisekiso ezinxulumene nalo mgaqo ziquka:
● I-SQL kunye ne-PL / SQL: ikhona ekufundeni ulwimi lweSQL.
● I-Oracle Application Express okanye i-Oracle APEX: inikeza iziphumo zokuzilungisa nokuziphucula ngokweenkqubo, i-apparatus iyakwazi ukulungelelaniswa kwaye ilawulwe kalula.
Ukwahlulelwa kwesiqinisekiso se-Oracle inikezela izifundo eziza kukunceda ngokubanzi malunga neengongoma eziphakamileyo zengqondo ezichazwe ngeelwimi yeSQL kunye nokwandisa ukuhlonishwa kwakho kwakhona. Iziqinisekiso ze-2 apha zi:
● Ukulawulwa kwendawo yolwazi lweSQL: unikeza iziphumo ezichongiweyo ngokukhawuleza kwedatha kunye nezicelo ezahlukeneyo ezichongiweyo.
● Umqhubi wam SQL: iziphumo ezifezekileyo apha zijolise ekuqhubekeni kweenkqubo zokubhala kunye nezicwangciso zemibuzo kunye nenjongo yokuba unokwenza imibiko elula yokuchazela abaxhasi.
I-Oracle yolwazi zidume emhlabeni jikelele. Ezi zatifikethi zikunceda ukuba ube yingcali ejongene nokujongana nolwazi lweenkcukacha. Iziqinisekiso ze-4 ezizodwa zihlanganiswe kule ndawo yezakhono. Ezi ziquka:
● I-Oracle Database 12c: esi sibonakaliso sibanika ii-DBAs (Abalawuli beDatabase) iimpawu ezibalulekileyo kwaye zifuneka ukuba zijongene nolwazi lwe-Oracle yolwazi kwansuku zonke. Ukongezelela kubakhuthaza ukucwangcisa, ukuphucula nokufezekisa iifom nokufakela ifomu. Iingcali zingakwazi ukudibanisa imisebenzi ngokusebenzisa i-multitenant and pluggable compartment database.
● I-Oracle Database 11g: isatifikethi sinikeza amandla kwiinkqubo zonyango olukhuselekileyo, oluthembekileyo, olulawulwayo kunye nexabiso elichanekileyo le-Oracle database 11g, enokusetyenziswa kwiindawo ezininzi zomthwalo womthwalo.
● Ilifa ledatha: le isitifiketi esikhutshwe ngokuchanekileyo ngokulawulwa kweenkcukacha ze-Oracle.
● I-Oracle Spatial 11g: isatifikethi sinikeza imfundo kunye neendlela zokujonga uviwo, ukuqaliswa kunye nokulawulwa kwedatha yendawo. Namuhla, ngaphezu kwe-80% yolwazi olufunyenwe ngumbutho wezoshishino lunokunikezelwa ngolwazi lwendawo.
Iziqinisekiso ze-Oracle zinikezelwa kumanqanaba athile, uMxhatshazo ebalulekileyo. Ezinye iimali ezikhulu ziyiNtloko yeNgcali, iNgcali kunye neengcali. Kufuneka uqale kwizinga elincinciweyo (iqabane). Izatifikethi eziphezulu ziyakunceda ukuba uhlaziye iimpawu zakho, kwaye ngokufanayo uza kukudlulisela amandla amaninzi, ukufunda nokuhlawulela.
Unako ukujoyina I-Oracle yunivesithi yase-intanethi ngokubhekiselele ekugqityweni kwezifundo zee-certified courses, ngelixa zikhona ezinye iziko ezizenzekelayo ezinxulumene ne-Oracle kwaye ziqinisekisiwe ukukunika iinkcukacha kunye neentlobo ezahlukeneyo Iziqinisekiso ze-Oracle nanjalo. Utitshala uqhube izifundo eziza kuqinisekisa ukuba ufumana zonke iimfundo kunye nezakhono onokuzigqiba ekukhombiseni iziqinisekiso ngaphandle kokusebenza. Izinto zokufunda zifikeleleka kwaye kufuneka ufunde ukuba uphendule imibuzo ngokufanelekileyo xa ujongene neempendulo ezidlulileyo ze-Oracle.
Ukuxhomekeke kwimeko yokuqinisekisa isiseko seenkcukacha, uya kuba nolwazi olufunekayo malunga nokulawulwa kweenkcukacha ze-Oracle. I Yolwazi ingasetyenziselwa kumgangatho omncinci, kwiziko nakumazinga aphezulu. Iziqinisekiso kunye neziqinisekiso ziya kuvuma ubuchule bakho kunye nolwazi oluchanekileyo kwaye lufaneleke ekuphuhliseni uqeqesho xa ungeze ngokungekho ngezandla kunye namava okwenene, nawo. Iziqinisekiso ziya kunceda iinkampani ngokuzenzekelayo ukuba zibone iziphumo zakho kwaye ziyakwenza ukuba ubeke ngokukhawuleza.
Amathuba amaJobe kunye neziNzuzo zeCandelo leZiko lokuQinisekisa